ရင်ထဲကရက်စွဲများ: ကိုကြီးကျော်နဲ့ ဘောလုံးပွဲ
ကျွန်တော်ပြောဦးမယ် ကျွန်တော်ကြုံဖူးတာလေးတွေပေါ့…. ကျွန်တော့်သွားဖူးတဲ့ နတ်ကနားပွဲ အကြောင်းပေါ့…… ကျွန်တော်က နတ်တွေအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းမသိပေမယ့် နတ်ကတဲ့ပွဲတော့ သွားကြည့်တာဝါသနာ့ပါသလားမမေးနဲ့….. “ရွှေလမ်း ငွေလမ်း ခင်းလုိ့ပေးမယ် ကျော် ကျော် ကျော် ကျော် တို့ကိုကြီးကျော် တို့ဖေဖေကျော်” ဆိုတဲ့ အသံကြားလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော်သွားကြည့်ချင်စိတ်တဖွားဖွားနဲ့ပေါ့…... ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နတ်ကနား ပေးတာက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းအိမ်မှာလေ….. သူတို့အိမ်မှာ နတ်ကနားပေးတိုင်း ကိုယ်တွေလည်းပျော်တာကို…. ဘယ်မသွားချင်ပဲရှိပါ့မလဲ…..
နတ်ကနား မကမီ တစ်ရက်အလို ကတည်းက နတ်စင်ဆောက်တာတွေ ပြင်တာဆင်တာ တွေလုပ်နေတည်းက ကိုယ်တွေက အဲဒီအိမ်မှာ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေတာဆိုတော့ ကကြမယ့်နတ်ကတော်တွေ၊ ဆိုင်းဆရာတွေ၊ မာမီတွေ အားလုံးနဲ့ရော အလှူရှင်မိသားစုနဲ့ပါ ရင်းနှီးနေတော့တာပေါ့…. ပြီးတော့ကျွန်တော့်တို အဖွဲ့ထဲမှာ ရုပ်တော်တော်ဖြောင့်တဲ့ တစ်ကောင်လည်းပါတယ်လေ….. အဲဒီကောင်နာမည်တော့ မပြောတော့ပါဘူးဗျာ….. သူ့ဖာသာအေးအေး ဆေးဆေး သင်္ဘောလိုက်ပါစေလေ….. ဟီး ဟီး ဟီး …. ….. သူ့ကိုဆို မာမီတွေက သိပ်ချစ်တာပေါ့လေ….. သားသား… သားသား…. နဲ့နေတာပဲ….. ဒီကောင်စန်းပွင့်တာကိုပြောတာပါ…..
နောက်တနေ့ မနက်မိုးလင်းလို့ နတ်ကနားက မကရသေးဘူး ကျွန်တော်က ရောက်နှင့်နေပြီလေ….. နတ်စင်အောက်က ပိတ်စနီနီအောက်မှာ အကျအန နေရာယူလိုက်တယ်ဗျာ…… အံမယ်ဒီနေရာက VIP နေရာနော်……. အလှူရှင်မိသားစုနဲ့ တော်တော်ရင်းနှီးကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကိုထားတာဗျာ…… မာမီတွေကချစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကလည်း ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း အိမ်ရှင်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ နတ်စင်အောက်မှာနေရာရတယ်ပေါ့……. ဒီလိုနဲ့ နတ်စပြီးကပြီဆိုကတည်းက နတ်ဝင်သည်တွေက ၀င်လာလိုက် ကလိုက် ရေနွေးကြမ်း ပဲသောက်တဲ့နတ်ရှိသလို ထန်းရည်၊ ဘီယာ၊ အရက် သောက်တဲ့ နတ်တွေလည်းရှိတာပေါ့…… နတ်ကမယ့် ဘယ်နတ်ကတော်ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းဖြစ်ထားပြီးသွားတော့ အားလုံးအေးဆေးပါပဲ….
သူတို့တစ်ယောက်ကပြီး နောက်တစ်ယောက်ကတယ်……. တစ်ယောက်မောသွားရင် နောက်တစ်ယောက် ၀င်ပြီးကတယ်….. နတ်ဝင်ပြီးကတဲ့နတ်ကတော် တော်တော်များများကလည်း နတ်ဝင်လာတာနဲ့လက်ထဲ ပုလင်းရောက်လာတော့တာပါပဲ…… နတ်တော်တော်များများ ဘီယာအရက်သောက်ကြတယ်ဗျာ…. သားတော်ကြီးတွေကတော့ ဘယ်စိတ်ကောင်းမလဲပေါ့…… ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နတ်စင်အောက်ထိုင်နေတဲ့ ကိုယ်တွေအဖွဲ့ကလည်း အင်မတန်မှ အကင်းပါတာလေ….. သူတို့အနားကိုရောက်လာတာနဲ့ ဟား… ဆိုပြီး ပါးစပ်ဖွင့်ပေးထားတာ ရေမြင်းပါးစပ်နီးနီးကို ရှိမယ်ထင်တယ်လေ….. အော်…. လူမှု့ရေးကလည်းရှိသေးတာကို ဗျာ….. ဟုတ်တယ်မဟုန်လား……. သူတို့ကလည်း ကိုယ့်အနားကိုရောက်လာတာနဲ့ ပါးစပ်ဖွင့်ထားမှတော့ ကဲသားတော်ကြီး လာထားဆိုပြီး လောင်းထည့်လိုက်တာ ရင်တွေကိုပူသွားတာပဲ….. နတ်ကတဲ့သူတွေသာ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် လူလဲပြီးကတာလေ ကိုယ်တွေက တစ်နေကုန် လူမှမလဲရတာ ရင်တွေပူတာပေါ့…… ဟဲ ဟဲ ဟဲ
နတ်ကနားပြီးခါနီး ညနေပိုင်းရောက်တော့ ၀င်တဲ့နတ်တွေက နတ်ဟောတယ် မှန်တယ်ပေါ့လေ….. နတ်ကနေရင်နဲ့ ဟောတာ...... နောက်ပြီး ကိုယ့်အလှည့်ရောက်တော့ နတ်ကတဲ့ နတ်ကတော်တစ်ယောက်ကို မေးဖူးသေးတယ် နတ်ကနားထဲမှာပေါ့…… သူကသားတော်ကြီး ဘာသိချင်လဲ….. ဘာလိုချင်လဲ လို့မေးတယ်လေ….. ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကလည်း တစ်နေကုန် ပါးစပ်ထဲ လာလောင်းထည့်ထားတဲ့ တံဆိပ်မျိုးစုံကို သောက်ထားကြတော့ မူးနေပြီပေါ့….. မူးတာမှ ခေါင်းတွေပါကိုက်ပြီးမူးတာ…… မှတ်မှတ်ရရ နတ်မေးမိလိုက်တာက ဒီညဘောလုံးပွဲ ဘယ်အသင်းနိုင်မလဲလို့….. အမှန်အကန်မေးတာပါဗျာ…… နောက်ပြောင်တာမဟုတ်ဘူးလေ…. ဒီတော့မှ နတ်ကတော်ကလည်းပြန်မေးတယ်ဗျာ…. ဘယ်အသင်းနဲ့ ဘယ်အသင်းလဲတဲ့….. ကျွန်တော်မှတ်မိနေတာကတော့ မာန်ယူနဲ့ လီပါပူး ကန်ကြမှာလို့ ပြောတော့ နတ်ကလည်း မာန်ုယူကိုသိတယ်ဗျာ….. “အေး အေး နင်တို့ နိုင်ရင် နတ်ကို ဘာဆက်သမှာလဲ” တဲ့ ….. ကျွန်တော်တို့ကလည်း မှန်လို့ နိုင်ခဲ့ရင် ခေါက်ဆွဲကြော် ဆက်မယ်ပေါ့….. ဒီတော့မှ နတ်ဝင်သည်ကပြောတယ် မန်ယူနိုင်မယ်တဲ့ နိုင်တာမှာ တစ်လုံးတည်းနဲ့ နိုင်မှာတဲ့ဗျာ..….. ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လည်း ဘယ်ရမလဲ နတ်ကနားထဲမှာတင် ချက်ချင်းကို ဖုန်းထုတ်ဆက်ပြီး လောင်းကြတာ နတ်ပွဲလာကြည့်တဲ့သူတွေလည်း လောင်းကြတာပေါ့….. သူငယ်ချင်းရဲ့ အစ်ကိုတွေလည်းလောင်းတယ်၊ အစ်မတွေတောင်ပါတယ်ဗျာ….. လောင်းလိုက်ကြတာ တော်တော်များပါတယ်….. သူတို့လမ်းထဲက လာကြည့်တဲ့သူတွေဆို ချက်ချင်းပြန်ပြေးပြီး နတ်ပေးတဲ့ဘောလုံးပွဲကို လောင်းလိုက်ကြတာ တော်တော်လေးကို အုန်းအုန်း ကြွက်ကြွက် ဖြစ်သွားသေးတယ်….. ဟဲ ဟဲ ဟဲ ….. ကိုယ်တွေမွှေလိုက်တာလေ……
ညရောက်တော့ ဘောလုံးပွဲက မိနစ်ရှစ်ဆယ်ကျော်နေပြီ တဖက်တဖက် မှ ဂိုးမသွင်းနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့ကလည်း ခပ်ရွတ်ရွတ်တွေဆိုတော့ မမှန်လို့ကတော့ တွေ့မယ်ပေါ့.... ကြိမ်းထားကြတာ…. ပွဲပြီးခါနီး ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မိနစ်မှ မာန်ယူအသင်းက တစ်ဂိုးသွင်းပြီး နိုင်သွားတယ်ဗျာ…… မှန်တယ်ဗျာ…… တော်တော်လည်း အံ့သြမိပါတယ်….. (အခုချိန်ထိ အဲဒီဘောလုံးပွဲကို လောင်းဖူးလို့ ပိုက်ဆံရဖူးတဲ့သူတွေ သက်ရှိထင်ရှားရှိပါသေးတယ်) “မေချစ်သား” ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ ဒီအကြောင်းကို သေချာကိုသိတာပါ…… ကျွန်တော်တို့လည်း ဘောလုံးပွဲပြီးတော့ ကိုယ့်ကတိအတိုင်းတော့ ချက်ချင်းသွားပြီး ခေါက်ဆွဲကြော်တော့ အပြေးအလွှားလေး ဆက်သလိုက်ရပါတယ်…… မဆက်သလို့ မဖြစ်ဘူးလေ..... နတ်ကိုင်ရင် ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလား ကြားဖူးတာပဲ..... ပြီးတော့ အဲဒီနေ့ကလည်း နတ်တွေတိုက်လို့ တော်တော်လေး သောက်မိလိုက်ပါတယ် ….. နတ်တွေက ကိုယ်တွေကို ချစ်တာကို….. ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ….. တစ်ခါမှ ဒီလောက်အမျိုးစုံအောင် မသောက်ဖူးတာပါဗျာ….. ထန်းရည်၊ ဘီယာ၊ ရမ်၊ ဂျင်၊ ၀ီစကီ၊ အရက်ဖြူ စုံနေတာပါပဲ….. ဒါကြောင့်မိုလို့ပြောတာပေါ့ နတ်ကနားထဲမှာ အရက်သောက်ရင် မမူးဖူးဆိုတာ မယုံဘူးလို့…..
“နောက်တစ်နေ့မနက် ပြန်တွေ့တော့မှ နတ်ကတော်က နင်တို့က မူးနေတော့ ကိုကြီးကျော်က ချစ်တာပေါ့တဲ့”
မှတ်ချက် ….. (ဘလော့ဂါတွေ ထဲမှာလည်း နတ်သီချင်းနဲ့ကဖူးတဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျာ….. ဘယ်သူဖြစ်မလဲ ခန့်မှန်းကြပါကုန်သော်….. သူကမြန်မာစကားမပြောတဲ့ နိုင်ငံမှာနေတယ်ဗျာ…..)
Posted by ကိုကိုသုန် at 5:39 PM
Labels: သူငယ်ချင်းများ, ဟာသ
ကျွန်တော် yu ya မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ် ကိုကိုသုန်ရေ..အဟီး။
ကျွန်တော်ဟာ လှေကားတစ်ခုရဲ့ အောက်ဆုံးထစ်မှာ သာရှိပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ အရမ်းချစ်ရတဲ့ချစ်သူလေး ရှိတယ်။
President Obama Singapore သို့လာမည်
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ နှင့် သခိုးကြီးည
ကျွန်တော် နှင့် သူမ